फेरि अर्की सुन्दरीका लागि नेपालीहरु भोट माग्दै, त्यस्तो पोलको भोट जुन जितेर केही हुनेवाला छैन – MySansar
फेरि अर्की सुन्दरीका लागि नेपालीहरु भोट माग्दै, त्यस्तो पोलको भोट जुन जितेर केही हुनेवाला छैन
Posted on October 22, 2016 October 28, 2016 by Salokya
अहिले फेसबुकमा केही नेपालीहरु सुन्दरी वर्षा लेखीका लागि भोट माग्दै स्टायटस र लिङ्क सेयर गरिरहेका छन्। मिस इन्टरनेसनल ब्युटी कन्टेस्टमा सहभागी हुन वर्षा अहिले जापानमा छिन्। उनी आफैले फेसबुकमा सहयोग चाहियो भन्दै भोट गर्न लिङ्क सेयर गरेकी छिन्।
तर यो लिङ्क पनि मिस इन्टरनेसनलको आधिकारिक वेबसाइट भने हैन। अस्ति भर्खरै मिस नेपाल अस्मी श्रेष्ठले पिपल्स च्वाइस अवार्ड पाइन्छ भन्दै मिस अर्थमा सहभागी भइरहेकी रोशनी खत्रीका लागि भोट दिन आह्वान गरेकी थिइन्। त्यो पनि यही अर्थात् मिस्सोलोजी नामको वेबसाइटको फोरममा राखिएको पोल नै थियो।
मिस्सोलोजी मिस युनिभर्स, मिस अर्थ, मिस इन्टरनेसनल आदि विभिन्न सौन्दर्य प्रतियोगिताको समाचार र फोटो पोस्ट गर्ने एउटा सामान्य साइट मात्र हो। यो वेबसाइटमा राखिएको पोल रमाइलोको लागि मात्र हो। यसमा मरिमेटेर भोट गरेर केही हुनेवाला छैन। यसको पोलमा जित्यो भने यसको यति भोट आयो भनेर त्यही ठाउँमा आउने मात्र हो। यसवापत् सुन्दरीहरुले कुनै अवार्ड पाउनेवाला छैनन्।
मिस इन्टरनेसनलको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। वेबसाइटमा वेब भोटिङ पनि हुन्छ भनेर कतै लेखिएको छैन।
मिस अर्थको भने फेसबुकमा एक सेयर गरे एक भोट र ट्विटरमा एक ट्विट गरे एक भोट काउन्ट हुने व्यवस्था गरिएको त्यसको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ। भोटको आधारमा मिस फोटोजेनिक छानिन्छ।
1 thought on “फेरि अर्की सुन्दरीका लागि नेपालीहरु भोट माग्दै, त्यस्तो पोलको भोट जुन जितेर केही हुनेवाला छैन”
भोट पनि के हाली रहनु र खोइ ? कति पटक रात रात जागेर महंगो डाटा किनेर पनि भोट हरियो अनि प्रतियोगी ले जितेपनी पछि आएर फलानो जात र तिलानो जात भनेर सामाजिक संजालआ झगडा गर्ने बाहेक केही भएन ……. । दिक्क।मात्र